Copella apụl ihe ọ Appleụ 1.35.ụ XNUMXL | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Copella Apple Juice 1.35L– Ordrs
Copella Apple ihe ọiceụiceụ 1.35L
Ihe ọiceụ Appleụ Apple.
- Copella Cloudy Apple Juice: Nwee ezi uto nke okike
- Na Copella, anyị na-eji apụl oge atụtụ aka ejiri aka pịa ha na Boxford Farm
- Iko a nwere 9 x 150ml servings
- 150ml na - enye otu n’ime mkpụrụ osisi na inine gị kwa ụbọchị
- Imekọrịta ihe na okike kemgbe 1969
Ihe niile malitere na 50 afọ gara aga ... mgbe Devora Peake ji aka ya were apụl mbụ ya na Boxford Farm. Ruo taa, anyị ka na-egosipụta ụkpụrụ oge adịghị mma nke ime obodo Suffolk - dị mfe, eziokwu na eziokwu. N'inwe uzo di iche iche na ekpomeekpo di iche iche enwere ihe obula nke diri onye obula. Gịnị ma ị nwaa Copella Apple na Elderflower. Ebube mara mma, nke na-atọ ụtọ nke British apụl na okenyeflower na-eme ka ọ bụrụ ihe ọkụkụ botanical, ma na-enye afọ ojuju dị ụtọ.
Enyere ya na Britain
Ọ bụghị site itinye uche
Ngwugwu ngwugwu: 1.35l